စိတ်ပညာ Archives ကို• musanews
ပင်မစာမျက်နှာ Tags: စိတ်ပညာ
Loris ချစ်သူများနေ့ - သြဂုတ်လ 19, 2021 0
မိသားစုနက္ခတ်များနှင့်သင်၏တည်ရှိမှုလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပါ။ ဘာတွေလဲ? မိသားစုနက္ခတ်များသည်ကုသရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Oedipus ကိုရှာဖွေခြင်း - ဒဏ္myာရီလော၊ (ပထမအပိုင်း)
Matteo Polimene - မေလ ၁ ရက်၊ 0
ဤဆောင်းပါးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စာဖတ်သူများကိုခေါင်းစဉ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ... Oedipus ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောစာစောင်များကိုဖွင့်လှစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ဖိအားဆန့်ကျင် TIME စီမံခန့်ခွဲမှု
Ilaria, La Mura - 21ပြီလ 2018, XNUMX 0
သင့်အချိန်ကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲသလဲ။ သင်တစ်စုံတစ်ရာသောအရာများစွာပြုလုပ်သည်၊ ကွဲပြားသောကတိက ၀ တ်များနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းအပြီးသတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင်မစီမံနိုင်သည့်အရာရှိသည်။
Ilaria, La Mura - မတ်လ 21, 2018 0
သူတစ်ပါးကိုလိမ်ခြင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုလိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ မုသားနောက်ကွယ်မှစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောကမ္ဘာကြီးရှိသည်။ အလိုဆန္ဒများ၊ အတွေးများ၊
Ilaria, La Mura - နိုဝင်ဘာ 16, 2017 0
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်၏ရှုမြင်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအမြင်သည်လက်တွေ့ကျနိုင်သည် (သို့) ပုံပျက်နိုင်သည်။ ဗဟုသုတပေါ်မူတည်သည်။
Loris ချစ်သူများနေ့ - နိုဝင်ဘာ 9, 2017 0
နယ်ခြားစောင့်တပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမမှန်မှုကားအဘယ်နည်း။ Borderline Personality Disorder သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားသောဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ထကြွလွယ်သောစိတ်ပျံ့နှံ့မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Shut up (လွတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့)! မစပ်ဆိုင်တဲ့စပ်သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ၆ ခု ...
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးပါကအရာအားလုံးကိုသူနှင့်မျှဝေလိုသည့်ဆန္ဒပြင်းပြသည်။ စုံတွဲ၏ကောင်းကျိုးအတွက် ... လုပ်ရန်
ပထမဆုံးလိင်အင်္ဂါသည် ဦး နှောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၊ အလိုဆန္ဒ (သို့) ဗီဇစတင်ခြင်းသည် "၎င်း" မှဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုငါတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဟုခေါ်ကြစို့ ...
Loris ချစ်သူများနေ့ - အောက်တိုဘာလ 31, 2017 0
ရင်းမြစ်: TARAMASCO Massimo (IDS နည်းလမ်းကိုဖန်တီးသူ - seduction engineering) Subliminal Emotional Communication အချစ်နည်းပြနှင့်သင်တန်းနည်းပြလှုံ့ဆော်မှုဟောပြောသူ၊ ဘဝနည်းပြနှင့် NLP ကျွမ်းကျင်သူ ...
ဖက်ရှင် BLOGGER? Chiara Ferragni သာမကဘဲ ဒီနေရာမှာအခြားမျက်နှာများကိုပိုမို ...